Amabika amabi kakhulu agcwalisekile: I-GOT ngeke ibuye kuze kube ngu-2019 | Izindaba zamagajethi
Amabika amabi kakhulu agcwalisekile: IGOT ngeke ibuye kuze kube ngu-2019
Futhi ngukuthi amahemuhemu ngaleli thuba lokungakwazi ukubona isizini yesishiyagalombili neyokugcina yeGame of Thrones (GOT) kuze kube ngu-2019 kuhlangatshezwane ne-HBO uqobo iqinisekise ngokusemthethweni lezi zindaba. Futhi, sengathi lezi zindaba bezingezimbi kubathandi bochungechunge oludumile, alukho usuku oluthile ekubuyeni kwakhe.
Lokhu kungukushaya okuhle kubo bonke labo abebelinde ukubona ukuphela kochungechunge kulo nyaka, nabalinde no-Anisa leyompi entsha enamahlebezi okuthi ifike esahlukweni sokugcina salolu chungechunge. Ababhali besikrini bokuqala sebeklonyelisiwe futhi manje okubi kakhulu okusele, linda ...
UDave Hill, uzophatha ukubhala isiqephu sokuqala, UBryan Cogman, kuzoba nguyena ozobhala owesibili bese kuthi okusele ngokwaziwayo kuzoba khona, UDB Weiss noDavid Benioff. Abaqondisi yilaba: UDavid Benioff, uDB Weiss, uDavid Nutter noMiguel Sapochnik. Mayelana nobude beziqephu, kukhulunywa ngento engaphezu kwe-movie ejwayelekile, ngakho-ke lokhu kuyinto enhle kulabo abathanda ukuhlala phambi kwethelevishini futhi baluthokozele lolu chungechunge.
Lapho isikhathi sesikhombisa seGame of Thrones siphela, abaningi basebevele becabanga ngesilandelayo esasizofika nesiphetho esimangazayo, kepha kubonakala sengathi kuzodingeka silinde isikhashana kunesidingo ngalokhu Isiqinisekiso esisemthethweni se-HBO. Uchungechunge lwaseMelika lusebenzela ukuxazulula izinkinga zokuphepha ezenze ukuthi kwazeke inethiwekhi yochungechunge ngaphambi kokuthi kukhonjiswe iziqephu futhi seluxwayisile nokuthi bangeza iziphetho ezahlukahlukene ukudukisa uma kunezinkinga.
Kuzofanele sibekezele kancane ngoba sekusele unyaka ukubona umphumela ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Amabika amabi kakhulu agcwalisekile: IGOT ngeke ibuye kuze kube ngu-2019
I-China ifuna ukubuyela eNyangeni kulo nyaka, kulokhu kuthunyelwe izitshalo nezinambuzane
IMicrosoft GLAS, i-thermostat ehlakaniphile eneCortana isivele inenani